Izindaba - Yiziphi izinzuzo zohlelo lokuphathwa kwempahla ye-RFID?
Elukiwe/Indwangu Rfid Wristband
I-Paper Rfid Wristband/Isongo
I-PVC Rfid Wristband/Isongo
I-RFID Yelula I-Elastic Wristband/Isongo
I-Plastic Rfid Wristband
Enye i-Rfid Wristband
13.56MHZ RFID Ikhadi
860mhz~960mhz Ikhadi le-UHF
Ikhadi le-RFID ye-Dual Chip
Xhumana ne-Chip Card
I-Smart Card Inlay
Umaka/isitikha se-windshield ye-RFID
I-Rfid Anti-Metal Tags
I-Rfid Glass Tag
I-RFID Animal Tag
Ithegi ye-RFID PPS yokuwasha
Ithegi yokuwasha ye-Silicone ye-UHF
I-UHF Textile Laundry Tag
I-RFID Keychain/RFID Keytag
Ku-Metal NFC Tag
Ithegi ye-NFC Token/Coin Tag
I-NFC Key Fobs
Amathegi e-NFC Epoxy
Umbhali we-NFC Reader
Umbhali we-NFC Reader ongathinteki
I-Mobile NFC Reader Writer
Amakhadi e-PVC Aphrinta Ngokwezifiso
Ithegi yomthwalo/I-Hang Tag
I-PVC Key fob/Tag yokhiye we-Snap-off
Imikhiqizo yokuvinjwa kwe-RFID
Isikhwama se-RFID Car Key
I-RFID Blocking Card Wallet
Ukuvimba Imikhono Yekhadi
Iphrinta yekhadi le-ID
Umnikazi Wekhadi Le-ID
Ukuqashelwa Kobuso Bomzimba Okushisa
Yiziphi izinzuzo zohlelo lokuphathwa kwempahla ye-RFID?
Kodwa-ke, isimo samanje sangempela sezindleko eziphezulu nokusebenza kahle okuphansi kusixhumanisi se-warehouse, ngophenyo lwabasebenzisi bendawo yokugcina impahla, izinkampani eziphethwe yifekthri kanye nabanye abasebenzisi be-warehouse, kutholakala ukuthi ukuphathwa kwempahla yendabuko kunezinkinga ezilandelayo:
1. Izimpahla sezizofakwa endaweni yokugcina izinto, futhi irisidi ye-warehouse ayikakathunyelwa, ngakho ngeke ikwazi ukusebenza ngokushesha.
2. Imoto yokulethwa ibingekho isikhathi eside. Ngemuva kokuhlola i-inventory, kutholakala ukuthi izimpahla namanje azikho endaweni yokugcina impahla.
3. Izimpahla zifakwe kwisitoreji, kodwa zikhohliwe ukurekhoda indawo yokugcina noma indawo yokugcina okungalungile irekhodiwe, futhi kuthatha enye isigamu sosuku ukuthola izimpahla.
4. Lapho bephuma endaweni yokugcina impahla, abasebenzi kudingeka bagijime baye emuva naphambili ezindaweni zokugcina izimpahla ukuze bathathe izimpahla, futhi isikhathi sokulinda izimoto side.
5. Ipuleti yizinsuku ezimbalwa kuphela, ngakho ukusebenza kahle kuphansi ngempela, nokusebenza kahle kuphansi, futhi kukhona amaphutha avamile.
6. Inani elikhulu lemikhiqizo yesikhathi esizayo esiseduze ingabalwa njalo lapho kuthathwa i-inventory, futhi ukungena kokuqala, ukuphuma kokuqala sekuphenduke inkulumo eyize.
Ukuba khona kwalezi zinkinga ze-warehouse ezingenhla kube nomthelela omubi ekuthuthukisweni nasekusebenzeni kwebhizinisi, futhi kuyadingeka ukuxazulula ngokushesha nokwenza ngcono izinga lokuphatha inqolobane. Ukuvela kohlelo lokuphatha indawo yokugcina impahla ye-RFID kunikeza amabhizinisi imodi yokuphatha impahla elula, esebenza kahle nehlakaniphile.
Ngakho-ke, sibhekene nezinkinga ze-warehouse ezingenhla, yiziphi izinzuzo zohlelo lokuphatha i-warehouse ye-RFID?
1.UHF Amathegi e-RFID
Ngokukhipha Amathegi e-elektroniki e-RFID ku-pallet ngayinye nendawo yokugcina impahla esitolo, futhi ngemishini ekhethekile ehlukahlukene, ingakwazi ukubona ukuhlonza okuzenzakalelayo kwe-pallet nolwazi lokugcinwa kwempahla, okusiza kakhulu umsebenzisi ukuphatha izimpahla zokusungula.
Ngesikhathi esifanayo, ngokusebenzisa i-UHF Ithegi ye-RFID ibophezela ezimpahleni, ingakwazi ukuhlukanisa ngokunembile izinkinga zangempela zokuphatha njengeqoqo, imodeli, igama lomkhiqizo, isikhathi sokugcina impahla, umphakeli, isimo, njll., futhi ukuphatha nokulawula kuhambisana kakhulu nezidingo zokuphatha zesimanje.
Imisebenzi yokwamukela nsuku zonke ingavunyelaniswa ngokuzenzekelayo kudivayisi ephathwa ngesandla ye-RFID, futhi ungakwazi ukwazi imininingwane yomsebenzi ngaphandle kwamarisidi ephepha.
Idatha yamarisidi ayidingi ukurekhodwa ngesandla, futhi isistimu iqoqa ngokuzenzakalelayo futhi ibale ukuze kuqinisekiswe ukunemba kwedatha yamarisidi.
Ngemva kokufika kwezimpahla endaweni yokugcina impahla, uhlelo luzobuyekeza ngokuzenzakalelayo inani lempahla esitolo, futhi imibhalo nayo izoqedwa.
Ngemva kwe Uhlelo lokuphathwa kwempahla ye-RFID ihlanganiswe ne-RFID forklift, imisebenzi yeshalofu ingakhishwa ku-RFID forklift ukuze isetshenziswe.
I-RFID forklift iskena iphalethi ngokuzenzakalelayo, ibonise imininingwane yempahla yephalethi kanye nolwazi lwendawo yokugcina impahla, ihambise indawo yokugcina impahla ngesikhathi sangempela, futhi yandise i-inventory eshalofini.
Uhlelo luzolungiselela ngokuzenzakalelayo indlela yokuhamba, asikho isidingo sokuhamba uye emuva naphambili, uhambo olulodwa nje ukuze uqedele ukukhetha izimpahla.
Ama-forklift e-RFID askena amathegi ephalethi e-RFID ukuze aqinisekise ngokushesha ulwazi lwezimpahla eziphumayo, futhi angenza ukuqinisekiswa kokuqala kokuphuma ukuze kuthuthukiswe inzuzo yokusungula.
Ngemuva kokuthi okuphumayo sekuqediwe, i-inventory ephumayo iyancipha ngokuzenzakalelayo.
Asikho isidingo samarisidi we-inventory yephepha, futhi inkundla yomsebenzi yeselula ye-RFID ingahlola ngokungenantambo amarisidi esistimu ku-inthanethi.
Asikho isidingo sokurekhoda mathupha imininingwane yedatha yokusungula, futhi isistimu isekela amarekhodi okusebenza esizeni.
Ukunemba kwe-inventory kufinyelela ezingeni lendawo kanye nezinga le-pallet, okwenza i-inventory ibe lula ukuyisebenzisa nokuyifeza; ukusekela i-inventory kanye ne-warehouse ngaphakathi nangaphandle kwebhizinisi ngesikhathi esifanayo.
Kuhlanganiswe nokusetshenziswa kwe-RFID forklifts, isivinini sokusungula siyashesha, futhi idatha yomehluko wokusungula ifinyezwa ngokuzenzakalelayo.
Ukusetshenziswa kohlelo lwe-RFID lokuphatha ishede kwenza kube lula ukusebenza kwansuku zonke kwendawo yokugcina izinto, futhi idatha iqoqwa ngokuzenzakalelayo futhi ibuyekezwe, kuqedwe isidingo sokufakwa ngesandla, ngaleyo ndlela kwakhiwe isikhungo sokugcina impahla esihlakaniphile nesizenzakalelayo sebhizinisi ukunciphisa izindleko nokwandisa ukusebenza kahle. .
Isikhathi sokuthumela: Dec-31-2021
I-Shenzhen Chuangxinji Smart Card Co., Ltd.
Factory Faka :5Level C Building Bao'guan Tech Park,Guanlan,Longhua District,Shenzhen,China.
Faka Ifekthri :6th Floor, Zhongxing 4th Road, Hetang Town, Pengjiang District, Jiangmen City, Guangdong Province, China.